Boqolaal Soomaali ah oo ka qaxay Denmark iyo sababta oo la ogaaday * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa qeyb ka ahaa 800 oo qof ee Soomaali ah, kuwaasoo dowlada Denmark ay sheegtay inay dib u qiimeyn ku sameyn doonto sharciyadooda magangalyada.
Mid ka mid ah Soomaalida dadkaas oo la hadlay Politiken sheegay inuu ogyahay waxa sugaya haddii Soomaaliya lagu celiyo, sidaas darteed uu doortay inuu ku dhuumaaleysto dalkaas ama uu isaga qaxo Denmark.
Ninkan oo magaciisa kusoo gaabiyay Ibrahim ayaa sheegay inuu ka mid ahaa Soomaalida dib u qiimeynta lagu sameeyay magangalaydooda.
Maadaama aysan Soomaaliya heshiis dib u celin kula jirin Denmark, wey adagtahay in Denmark ay dadkaas dib ugu celiso dalkooda. Taasoo ka dhigan ineysan sii wadin karin noloshoodii caadiga aheyd ee Denmark, aana lagu celin karin dalkooda. Waxaana inta badan dib loogu celiyaa xeryo qoxooti, taasoo keenta in dad badan ay ka cararaan Denmark ama ay dalkaas gudahiisa qaab dhuumaaleysi ah ugu noolaadaan.